Iindaba-iziko lokuthengisa le-DTS elihamba ngemisebenzi yoqeqesho ebhaliweyo
NgeCawa, nge-3 kaJulayi ngo-2016, iqondo lobushushu belingama-33 degrees celcius, Bonke abasebenzi beDTS Marketing Centre kunye nabanye abasebenzi bamanye amasebe (kubandakanya uSihlalo uJiang Wei kunye neenkokheli ezahlukeneyo zentengiso) benze umxholo othi "ukuhamba, ukunyuka iintaba, ukutya ubunzima, ukubila, ukuvuka, nokwenza umsebenzi olungileyo ”. Ukuhamba ngenyawo.
Indawo yokuqala yale seshoni yoqeqesho yikomkhulu lenkampani, isikwere esiphambi kwesakhiwo seofisi seDTS Food Industrial Equipment Co, Ltd .; Indawo yokuphela yiPaki yeZhushan yeSixeko saseZhucheng, kwaye uhambo olwehla kwintaba luphelele ngaphezulu kweekhilomitha ezingama-20. Kwangaxeshanye, ukonyusa ubunzima balo msebenzi wokunyuka kwentaba kunye nokuvumela abasebenzi ukuba basondele kwindalo, inkampani ikhethe ngokukodwa iindlela ezixineneyo ezilalini.
Ngeli xesha lokuhamba ngenqanawa, kwakungekho sithuthi sokuhlangula, kwaye bonke bemka, uninzi lwabasebenzi lwalucinga ukuba abanakuma, ngakumbi abanye abasebenzi, babenombono wokuma phakathi. Nangona kunjalo, ngoncedo lweqela kunye nokukhuthaza imbeko ngokudibeneyo, abasebenzi abangama-61 (kubandakanya nabasetyhini abali-15) abathathe inxaxheba kuqeqesho bafikelela ezantsi kweNtaba yaseZhushan, kodwa ayisosiphelo soqeqesho lwethu, injongo yethu yeyona iphambili yentaba Ukuze siye entabeni ngaxeshanye, sithathe ikhefu emazantsi entaba kwaye sishiya umkhondo wethu apha.
Emva kwekhefu elifutshane, iqela liqale uhambo lokukhwela intaba; indlela yokunyuka yayiyingozi kwaye inzima, imilenze yethu yayimuncu kwaye iimpahla zimanzi, kodwa sikwafumene umbono ongabonakaliyo eofisini, ingca eluhlaza, iinduli eziluhlaza kunye neentyatyambo ezinuka kamnandi.
Emva kweeyure ezi-4 ezinesiqingatha, ekugqibeleni safika encotsheni yentaba;
Phezulu kwentaba, bonke abantu ababandakanyekayo kuqeqesho bashiye amagama abo kwibhanile yenkampani, eya kuthi igcinwe yinkampani ngonaphakade.
Kwangelo xesha, emva kokunyuka intaba, uMongameli Jiang naye wenza intetho. Uthe: Nangona sidiniwe kwaye sibile kakhulu, asinanto yokutya okanye yokusela, kodwa sinomzimba ophilileyo. Sibonakalisile ukuba akukho nto ayinakwenzeka ngomsebenzi onzima.
Emva kwemizuzu engama-30 yokuphumla encotsheni yentaba, saqala indlela esehla entabeni saza sabuyela kwinkampani nge-15: 00 emva kwemini.
Ukujonga emva kuyo yonke inkqubo yoqeqesho, bekukho iimvakalelo ezininzi. Endleleni, kwakukho inenekazi elalini elalithetha into oyenzileyo ngemini eshushu ngolu hlobo, ukuba wenzeni ukuba uyadinwa kwaye uyagula; kodwa abasebenzi bethu bonke bancumile nje kwaye baqhubeka. Ewe, kuba ayinanto yakwenza nokudinwa. Into esiyifunayo kukuvunywa kunye nobungqina bethu.
Ukusuka kwinkampani ukuya eTshushan; ukusuka kulusu olulungileyo ukuya kwitshentshe; ukusuka kwintandabuzo ukuya ekuzazeleni; Olu luqeqesho lwethu, esi sisivuno sethu, kwaye ikwabonisa inkcubeko ye-DTS, ukusebenza, ukufunda, ukuqhubela phambili, ukudala, ukuvuna, ukonwaba, nokwabelana.
Kukho kuphela abasebenzi abagqwesileyo kunye neenkampani ezigqwesileyo. Siyakholelwa kwelokuba eli qela labasebenzi abasebenza nzima nabazingisayo, i-DTS iyakube ingenakoyiswa kwaye ingenakoyiswa kukhuphiswano lweemarike oluzayo!